Fa maninona i Edson Glauber? - Countdown ho an'ny Fanjakana
Ny fisehon'i Jesosy, Ilay Reninay ary St. Joseph hatrany amin'i Edson Glauber, roa amby roapolo taona, ary ny reniny, Maria do Carmo, dia nanomboka tamin'ny 1994. Izy ireo no nantsoina ho fisehoana Itapiranga, nomena anarana taorian'ny tanànany teratany tany amin'ny alan'i Amazon Breziliana. . Ilay Maria Virjiny dia nanondro ny tenany ho "Mpanjakavavin'ny Rosary sy ny fandriam-pahalemana" ary ireo hafatra matetika dia nanantitrantitra fa nivavaka isan'andro ilay Rosary — indrindra indrindra ny rosary fianakaviana, namily ny fahitalavitra, nankany amin'ny fiaiken-keloka, ny Eokaristia Fiainana, ary koa ny fanamafisana. fa ny "tena Fiangonana dia Eglizy Katolika romana romana, ary" akaiky ny famaizana "tsy ho ela. Ny Tompontsika dia naneho ny lanitra, ny helo ary ny fanadiovana an'i Edson, ary niaraka tamin'i Jesosy Zanany, dia nanome fampianarana isan-karazany ho an'ny fianakaviana ho an'i Maria do Carmo.
Ambonin'izany, ny Our Lady dia nangataka manokana ny fitoriana ny filazantsara kristiana nitodika tamin'ny fomba miavaka ho an'ny tanora, ny fananganana trano fiangonana tsotra ho an'ny mpivahiny, ary ny andrim-pananganana lasopy ao Itapiranga ho an'ny ankizy sahirana.
Ny rain'i Edson, izay nivadika alikaola dia niova fo noho ny fitarihan'ireo fisehoana, dia hita, taty aoriana, dia nandohalika nivavaka izy ny marainan'ny Rosary tao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny, ary nilaza ny Our Lady fa tany lehibe iray izay nananany azy dia azy sy Andriamanitra. Nikasika tamin'ny tanany ny mpanjakavavin'ny Rosary izay nanondraka rano avy any amin'ny toerana hita maso tao Itapiranga ary nangataka ny hitondrana rano ho an'ny marary hahasitrana. Betsaka ny fanasitranana mahagaga notaterina, nohamarinin'ny mpitsabo, ary maro no naroso tany amin'ny Prefektur Apostolikan'ny Italianaatiara. Nangataka ihany koa ny Our Lady, mba hananganana trano fiangonana, izay mbola mijoro.
Tamin'ny 1997, ny hafatr'i Itapiranga dia nanantitrantitra ny fanoloran-tena ho an'i St. Joseph Most Chaste Heart, ary nangataka i Jesosy mba hampidirina ao amin'ny Fiangonana izao ny andro firavoravoana:
Ny alarobia 11 jona 1997, ny andro, tamin'ity Fety ity nangatahana tamin'ity taona ity, dia nilaza ny manaraka ireto reny Roaja ireto, nanondro ireo fitohitohizan'ny fianakaviana masina izay nitranga tao Ghiaie de Bonate tao avaratr'i Italia nandritra ny taona 1940— ny fisehoana izay nanaovana an'i St Joseph Joseph dia namboarina ihany koa:
Edson mbola tsy naheno ny momba an'i Ghiaie di Bonate na ireo fisehoana tao.
Tahaka ny nitranga tamin'ny fisehon-dahatsoratra Marian hafa, toa an'i Fatima sy Medjugorje, dia nanambara tamin'ny tsiambaratelo Edson ny tsiambaratelon'i Edson izay mikasika ny hoavin'ny Fiangonana sy izao tontolo izao, ary koa ny zava-nitranga lehibe amin'ny ho avy tsy tokony hiova fo ny olombelona. Amin'izao fotoana izao, misy tsiambaratelo sivy: efatra mifandraika amin'i Brezila, roa ho an'izao tontolo izao, roa ho an'ny Fiangonana, ary iray ho an'ireo izay manohy miaina fiainana ota. Nilaza tamin'i Edson ny Our Lady fa hamela masony hita eo amin'ny Tendrombohitra Lakroa izy akaikin'ny trano fiangonana ao Itapiranga. Niseho teo anoloan'ny hazofijaliana teo an-tendrombohitra teo akaikin'ny trano fiangonana izy, nilaza hoe:
Dom Carillo Gritti, evekan'ny diosezin'i Itacoatiara, dia nankatoavin'ny fizarana 1994-1998 ny fisehoana ho "goavam-be" izay niainga tamin'ny 31 Mey 2009 ary nametraka ny vato fehizoron'ny Sanctuary vaovao any Itapiranga tamin'ny 2 May 2010. amin'i Edson Glauber, izay mihoatra ny 2000 pejy, dia mifanaraka tsara amin'ny loharanom-paminaniana maro azo itokisana ary manana refy eschatolojika mafy. Izy ireo dia tanjon'ny fandalinana maro, ary ny Dr. Mari Miravalle avy ao amin'ny University Steubenville dia nanokana boky ho azy ireo, antsoina hoe Ny Fo Telo: Fisehoan'i Jesosy sy Maria ary Josefa avy any amoron'i Amazona.
Hatramin'ny nahafatesan'i Dom Gritti tamin'ny taona 2016, dia mbola nisy ny fifanolanana mbola tsy voavaha teo amin'ny diosezin'i Itacoatiara sy ny fikambanana naorin'i Edson Glauber sy ny fianakaviany hanohanana ny fananganana ny Sanctuary. Ny mpandrindra Diocesan dia nifandray tamin'ny fiangonana ho an'ny Fotopampianaran'ny Finoana ary nahazo fanambarana tamin'ny taona 2017 amin'ny fiantraikany fa ny CDF dia tsy nandinika ireo fisehoan'olombelona mahery vaika niaviany, toerana iray izay nitazona ny Archdiocese of Manaus ihany koa. Ny CDF, teo ambany kardinaly Gerhard Ludwig Müller, dia tsy nanonona ny mpahita faharoa, Maria do Carmo, izay nifanarahana tamin'ny fankatoavan'ny Eveka Gritti ankehitriny.
Raha toa ka tsy ekena amin'ny fomba ofisialy intsony ny fisehoana (fa tsy ekena amin'ny fomba ofisialy), dia azo apetraka amin'ny fomba ara-dalàna ny antony nahatonga antsika nisafidy haneho ireo fitaovana noraisin'i Edson Glauber amin'ity tranonkala ity. Ny fihetsika izay natao tamin'ny CDF dia nametra ihany ny 1) fampiroboroboana ofisialy Liturgical ny hafatr'i Edson, 2) "fanaparitahana bebe kokoa" ny hafatr'i Edson tenany na ny 'Association' ao Itapiranga, ary 3) fampiroboroboana ireo hafatra ao amin'ny Prelature of Itacoatiara. Mitoetra hatrany amin'ny fankatoavantsika ireo toromarika rehetra ireo; ary, raha voaheloka amin'ny fomba ofisialy ny hafany, dia esorinay avy amin'ity tranokala ity izany.
Na marina aza fa ny Dr. Miravalle dia nanala ny bokiny taorian'ny fianarany ny antontan-taratasin'ny CDF, tsara ihany ny manamarika fa tranokala marobe manerantany izay ahitana fitaovana ara-paminaniana fantatra fa noho ny fahatokiana ny fampianaran'ny Fiangonana dia nanapa-kevitra hanohy ny famoahana ny dikanteny ny hafatra Itapiranga. Ity angamba no tsara hazavaina amin'ny zava-misy fa, nandritra ny androm-piainan'i Dom Carillo Gritti, nahazo endrika fankatoavana tsy fahita firy ny fisehoana Itapiranga ary nisy mpaneho hevitra maro nanontany momba ny fanavaozana mahazatra ny hetsika nataon'ny Diocesan Administrator. Ankoatr'izay, ny maha maika ny votoatin'ny hafatra dia ny fanemorana ny fampielezana ity fitaovana ity mandra-pahatongan'ny famahana ny raharahan'i Edson Glauber (izay mety haharitra taona maro) mety hampidi-doza ny fampanginana ny feon'ny lanitra amin'ny fotoana tena ilantsika mihaino izany.
Hafatra avy amin'i Edson Glauber
Edson - tafiotra mahery
Betsaka no ho very finoana.
Edson - Aza mamoy fo!
Fitiavana lehibe toy izany no itiavany anao.
Edson - Karakarao ny tranonao
Diovy amin'ny maloto rehetra ny tranonareo.
... tsy afaka manana tanjaka hiady ianao.
Maro ny fo mangatsiaka amin'ny finoana.
... hanangona ny zanany am-bavaka.
Edson - Inona no tsy mety aminao
... ny Zanako dia manome amin'ny alàlan'ny vavaka Rosary sy Jesosy.
Edson - Rosary isan'andro
Mivavaha ary mifadia. Mivavaha ary mifadia. Mivavaha ary mifadia.
Edson - Matokia ny Fitiavan'i Jesosy
Tonga tampoka eo am-piangonana ny dona mahafaty.
Edson Glauber - Ao am-pon'ny zanako, tsy hatahotra ny zavatra rehetra ianao
Na ny hazofijaliana, na ny fitsapana, na ny fanenjehana izay ho tonga eo amin'izao tontolo izao.
Edson Glauber - Ho avy ny ora voatondro
Ny teniko izay voalaza eto dia ho tanteraka.
Edson Glauber - Mihatra aminao hatrany ny fanaintainana
... mampitomany ny ranomasonao ianao satria lasa marenina hatramin'ny feon'ny reny amiko.
Edson Glauber - Miomana amin'ny fifanolanana manerantany
Fijaliana lehibe toy izay tsy mbola nisy izany.
Edson Glauber - Ny fahotana dia mitarika ny fianjeran'Andriamanitra
Edson Glauber - Telo minitra sisa tavela amin'ny famantaran'Andriamanitra
... mba hiova fo ny zanak'olombelona alohan'ny fisehoan-javatra lehibe izay hampihorohoro azy mandrakizay.
Edson Glauber - Fatima dia ho tanteraka ankehitriny
Tonga ny fotoam-pitsapana lehibe.
Edson Glauber - St. Joseph Hanampy
Miantso ny fanampiako amim-pahatokisana sy finoana.
Edson Glauber - Ny fanamasinan'ny fiangonana
Noho ny fahotana, ny fanalam-baraka sy faharatsiana.
Edson Glauber - Ady eokaristia
Hilaza izy ireo fa mpamorona ahy.
Ra ao Vatikana!
Miovaova, miovaova, miova fo!
Edson Glauber - Atsangana ny sabatra mirehitra
Edson Glauber - Mivavaha ho an'ny mpitondra fivavahana
Nanafika azy ireo mafy ny devoly.
Edson Glauber - Maro no voasivana
Mampiseho ny zava-misy iainan'izy ireo eo anoloany Andriamanitra.
← Maninona no fanahy tsy azo inoana?
Luisa Picarretta - Amin'ny famaizana →